10 Toerana misy an'i Phoenix Pizza ao Phoenix sy Scottsdale
Etazonia Arizona Phoenix
10 Toerana misy ny toerana misy ny toerana misy an'i Phoenix
Tsy manambara aho fa manana ny teny farany amin'ny pizza. Fantatro fa raha mitady pizza ianao dia misy safidy maro ao Phoenix. Tsy manana na inona na inona manohitra ny fandefasana serivisy toy ny Pizza Hut na Domino na Papa John. Manana ny tanjon'izy ireo izy ireo. Indraindray, mila mivoaka fotsiny ianao ary mahazo pizza vaovao ao amin'ny trano fisakafoanana. Moa ve ireo ireo tsara indrindra? Pizza dia niteraka adihevitra mafana, ary ny famaritana ny tsara indrindra dia tena samirery.
Ny Phoenix dia nomena ho anisan'ny tanàna tsara pizza eto amin'ny firenena! Hahita ny fomba rehetra ianao eto.
Affordable and Romantic. Judy Hedding
Mankanesa any amin'ny zaridainanao kelin'i Italy rehefa mitsidika an'ity toerana ity ianao amin'ny toerana iray: efatra i Scottsdale, Phoenix, Gilbert ary Glendale. Mety tsy ho toy ny pizza ampiasainao amin'ny fananana masomboly vita, ary tsy misy pizza misimisy ao eto, fa raha mankafy crusta malefaka miaraka amin'ireo voankazo sy cheesy italiana eo amin'ny pizza ianao, dia miezaka aho mba hahazo Ery.
Sakafo mena sy tongolo gasy. Judy Hedding
Amin'ity tranga ity, ny NYPD dia tsy midika hoe Department of Police New York. Mijoro ho an'ny Departemanta Pizza New York izy io. Teofilo vita amin'ny poti-tsakafo, saosy pizza nohariana, ronono mozzarella iray manontolo - ampahafolony iray manontolo amin'ny kitay 18 "kitay" - natao tao anaty fantsom-bato efa tranainy. Indray, ianao dia hahita fianakaviana sy mpivady eo amin'ny daty fitsaboana eto. Gilbert, Chandler, Tempe, Mesa, Scottsdale, Phoenix, Surprise, Glendale, Avondale. Ny efitrano fisakafoanana dia mety mila fanavaozana ho an'ny fomba, saingy tsara ny pizza.
Chris Bianco sy ny pizza restaurant ao afovoan-tananan'i Phoenix dia nahazo mari-pankasitrahana maromaro, anisan'izany ny nantsoina hoe pizza tsara indrindra tany Amerika tamin'ny taona 2001. Tsy misy maharatsy ny mividy fivarotana lehibe ho an'ny orinasa iray, ary ny Pizzeria Bianco dia nanan-karena tamin'ny hatezerana. Honestly, ny pizza izay nananako dia tena tsara, na dia somary mahonena aza ny staff. Toerana iray tena bitika izany, ka tsy mahazatra izany mandritra ny tampon-kavoana mba hiandry eo anelanelan'ny 1 sy 3 ora ho an'ny pizza. Tsy vonona ny hanao izany aho, na dia afaka manampy ny fotoana aza ny backgammon sy bar iray divay, dia nandeha tamin'ny 2 hariva aho.
Grimaldi dia nantsoina hoe Patsy Grimaldi ary novain'ny tompony hatramin'ny nanatonany ny Lohasahan'ny Masoandro. Nanomboka tany Scottsdale izy ireo ary nanomboka nitatra tany Chandler, Peoria ary Gilbert. Ny tantaran'i Grimaldi dia manana fototra niavian'ilay pizza voalohany voalohany any Amerika any Brooklyn, New York. Biby namboarina natao tany an-trano, fanangonana vaovao tao amin'ny trano fisakafoanana fisakafoana tsara tarehy.
La Piazza al Forno dia fianakaviana iray, toeram-pisakafoanana tokana miavaka ao amin'ny Glendale Historic Downtown. Izy ireo dia manolotra pizza biriky ho an'ny biriky ary entrées ao anaty tontolo tsy mahazatra, eo amin'ny fianakaviana. Rehefa any Glendale aho, dia toa mihodina eo amin'ny làlan'io pizza io ny fiarako.
Ny La Piazza Al Forno dia nasongadina tao amin'ny Diners, Drive-Ins sy Dives
Ny miora ao amin'ny Mellow dia mahazo fitsaboana tsara fanahy sy trano fandraisam-bahiny ary fanasana miaraka amin'ireo toerana ao Tempe, Phoenix Andrefana ary Phoenix Avaratra ao amin'ny City North. Tiako ny pizza fotsy na pizza manokana Magical Tour, miaraka amin'ny fototra pesto, holatra Portobello, feta sy mozzarella cheeses, spinach ary jalapeños ao anaty pesto boribory. Fa raha tsy izany dia tsy manana anao manokana izy ireo, na mazava ho azy, afaka mamorona ny anao manokana.
Ao amin'ny Downtown Phoenix, ao anaty bungalow kely naverina tamin'ny laoniny, dia manolotra pizza Neapolitan Style miaraka amin'ny salady sy italiana i Cibo manasongadina ny pasta homéade amin'ny sakafo antoandro sy sakafo fisakafoanana.
At organ Stop Pizza. Judy Hedding
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mandeha any amin'ny Pizza Stop Pizza ho an'ny pizza. Honestly, tsara kokoa aho ary mbola ratsy kokoa. Organ Stop Pizza dia traikefa miavaka ao Mesa, Arizona. Mahasarika kokoa noho ny trano fisakafoanana izany! Ny tena mahavariana dia raha mihinana ny pizza ianao, dia halain'ny olona iray milalao ny groupe Wurlitzer eto amin'izao tontolo izao. Ao amin'ny faritra fisakafoana ara-pianakaviana, dia misy tampon'ny 43 metatra ny fanakalozana ny taova. Ny konsole dia mijanona amin'ny 8000 pound rotary hydraulic elevator. Ny mpikaroka dia milalao be mpitia ary mitaky fangatahana. Ny ankamaroan'ny mpihaino dia eo amin'ny 60 taona na latsaka folo taona, nefa mitsidika ny taona rehetra.
Nieritreritra ve aho fa pizza goavana? Tsy dia izany loatra. Na izany aza, mbola tsy nahita toerana izay tsy sahirana aho, noho izany dia azoko antoka fa izaho no fa tsy izy ireo. Manolotra karazana voamadinika vita amin'ny pizza izy ireo. Maherin'ny toerana folo ao amin'ny faritr'i Phoenix.
Eny, fantatro fa fisaka ny California Pizza Kitchen. Any amin'ny toerana misy azy dia afaka mahita azy ireo any Phoenix, Scottsdale, Tempe, Chandler ary Mesa. Nihinana vetivety aho. Ny sakafo dia lehibe amin'ny karazana tsy misy pizza, tsy zavatra italiana raha tsy ny olon-drehetra ao amin'ny tarika no tia pizza. Ary koa, raha tianao ny pizza tsy mahazatra, toy ny Mango Tandoori Chicken Pizza, Shrimp Scampi Pizza na Hawaiian Pizza, dia ho faly eto ianao. Manana karazana tsy misakafo ihany koa izy ireo.
Sarintany momba ny sarimihetsika Phoenix sy Directions
Phoenix Recycling Dos sy Don'ts
Kids That Rip! Indoor Skate Park
Scorpion Map of Phoenix
Toerana Lehibe mba Hitsidika Any Amin'ny Faritra Lehibe Phoenix
Aza misavoana lehibe any Amerika Atsimo
Barbados Villas ho an'ny teti-bola tsirairay
Boky tsara indrindra ho an'ny ankizy
Top 10 famantarana ny fitsangatsanganan-dalana azo atao
Montreal June 2017 Events and Attractions
Torohevitra momba ny Budget Budget Barbados
Tickets of the Republic of India Day Parade
Toeram-piasan'ny bus sy coaches any New Zealand
Aostralia & Nouvelle Zélande
Inona no tsy tokony hatao any Frantsa
Sarimihetsika iray amin'ny Fetiben'ny sarimihetsika telo tany Milwaukee
Ny Krismasy sy ny Taom-baovao maimaimpoana ao amin'ny Robson Square ao Vancouver, BC
Mianara momba ireo Indiana Indianina any Karaiba
Bookworm? Loha ho an'ny 10 amin'ireo bokikely tsara indrindra ao Paris